विकासका लागि भारत–नेपाल दुवै सरकारको ईन्ट्रेस मिल्दा ओली भ्रमण महत्वपुर्ण - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
विकासका लागि भारत–नेपाल दुवै सरकारको ईन्ट्रेस मिल्दा ओली भ्रमण महत्वपुर्ण
Posted by Milap Subedi | २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार १७:२१ |
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी देश भारतको राजकिय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणको क्रममा खासगरी सम्झौता कार्यान्वयनलाई विभिन्न सरोकारवालाले जोड दिईरहेका छन । यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने विश्वास लिइएको छ । दुवै देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको भेटले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो चमक आउछ भन्ने सवालमा रहेर हेडलाईन नेपालका लागि राज ढुंगानाले भारत–नेपाल जानकार तथा अर्थशास्त्री डा. हरिबंश झा संग गरेको कुराकानी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट भएको छ यसबाट नेपालले के पाउछ ?
के पाउछ भन्दा खेरी यो गिभ एण्ड टेक हुन्छ, यो वान साईडेड हुँदैन, भन्दाखेरी हामी पनि भारतसंग सम्झौता गर्न गईरहेका छौँ । सम्झौताको अर्थ दुवै देशको समान चासो रहन्छ । त्यसैले हामी खाली भारतबाट लिने मात्रै हुँदैन केही दिनुपर्ने अवस्थामा छौँ सम्झौता भनेकै केही लिने र दिने हो । तर त्यो देश र जनताको स्वार्थ अनकुल हुनपर्छ ।
हरिबंश सर खासमा हामीले दिनपर्ने चाँही के हुनसक्छ ?
त्यो लिने र दिने कुरा मैले जुन भने नी (हाँस्दै) अरुण प्रोजेक्ट मै छ, त्यसपछि महाकाली पञ्चेश्वरको कुरा छ । आयोजनाको शिलान्यासको कुरा छ । त्यस्तै अरुपनि परियोजनाको कुरा छ । त्यस्तै विरगञ्ज कस्टमका कुरा लगायतका विषयमा कुरा गर्न हामी गईरहेका छौँ र भारतले पनि नेपालको हितमा काम गर्न अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ ।
यो भ्रमणलाई अघिपछिको सरकारको भ्रमण भन्दा बढी नै महत्वपुर्ण छ भन्ने. प्रचार भईरहेको छ, यो सही हो ?
यो एकदम सही हो । हामीसंग स्थायी सरकार लामो समयसम्म भएन । अहिले यो सरकार शक्तिशाली छ । अहिले यो धरै समयपछि पाँच बर्ष सरकार चलाउनको लागि आएको छ । सरकार चलाउने पार्टी पनि शक्तिशाली छ । अर्को कुरा भारतमा पनि सरकार चलाउने पार्टी विजेपी शक्तिशाली छ । उसको प्रभाव देशभरी नै फैलदैछ । यसकारण पनि यो दुवै मुलुक र सरकार प्रमुखहरुको ईन्ट्रेस मिल्छ । यसकारण पनि यो भ्रमण महत्वपुर्ण छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो भ्रमणले पहिलेको भन्दा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने लाग्छ ?
मलाई विश्वास छ । हामी जुुन प्रकारले नयाँ आयाम थप्छ भनिरहेका छौँ, त्यो अवस्य पनि हुने म देख्छु । किनभने नेपालमा यो सरकारलाई जनताको पुर्ण साथ छ जनताको म्याण्डेट पाएको छ । विकास गर्नको लागिपनि नेपाल भारत मिलेर जानुको विकल्प छैन । अहिलेको परिस्थितीमा दुवै सरकारले चाहेको खण्डमा दुवै देशका नागरिकको हितमा काम गर्न कसैबाट बाधा छैन । अहिले यो सरकारले भारतसंग काँधमा काँध मिलाएर राष्ट्रहितमा लाग्नुपर्छ । अहिलेको भ्रमणले दुवै देशमा राजनितिक स्थिरता कायम रहेकाले केही नयाँ हुनेमा दुईमत छैन । त्यसैले पनि यो भ्रमणले नयाँ आयाम थप्छ भन्नेमा म चाँही ढुक्क छु ।
नेपालका सरकार प्रमुखहरु भारत जाँदा जहिल्यै पनि हाउबुजीको भावमा जनताप्रति सपथ खानपर्ने , यो बाध्यता की शंकामात्रै ?
खासमा भन्नुपर्दा यो विषयमा यतीविधि हल्ला हुनपर्ने आवश्यक छैन । तर जनताले दुवै देशमा सम्बन्ध राम्रो होस्, सहयोगको निरन्तरता होस् र कुनै किसिमको मैतक्यता नआओस् भनेर नै यस किसिमले आवाज उठाएको जस्तो मलाई लाग्छ । दुईदेश विचको खुल्ला सिमा, रोटीबेटीको सम्बन्ध र सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक भएकै कारण पनि यो भएको हुन सक्छ यसका शंका भन्दा पनि म चाँही चिन्ताको रुपमा लिन्छु ।
नेपालले विगतदेखी एक दर्जन मुद्धालाई उठाईरहेको छ । तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ अहिलेको भ्रमणले विगतको सम्झौता कार्यान्वयनमा तिव्रता आउने देख्नुहुन्छ ?
पहिलेको भारत र अहिलेको भारतमा धेरै फरक छ । खासगरी भारतिय प्रधानमन्त्री मोदी जी को चाहना सबै छिमेकी मुलुकसंग राम्रो सम्बन्ध बनाउने चाहना छ । त्यसकारण पनि अव कार्यान्वयन पक्षमा सुस्तता हट्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले चिन पनि नेपालको विकास निर्माणमा छिमेकीको हैसियतले प्रतिस्पर्धामा आईसकेको छ । अव भारतले पहिलाको जस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भारत पनि जतिपनि आयोजनाहरु छन, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न आतुर छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
Previousलन्डनमा साहित्य सन्ध्या
Nextसामसङले ल्यायो नयाँ अफर– “२०७५ साल सामसङ अफर बबाल”
१६ श्रावण २०७५, बुधबार १७:२६
‘वाम गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन आतुर’ : माधव नेपाल
१२ पुष २०७४, बुधबार १३:२९
२० चैत्र २०७३, आईतवार ११:०५